Ciidamada Israel oo toogasho ku dilay 16 Falastiiniyiin ah – Banaadir weyne
Ciidamada Israel oo toogasho ku dilay 16 Falastiiniyiin ah
Wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israel ay toogasho ku dileen 16 qof oo Falastiiniyiin ah, ayada kumanaan qof ay isugu soo baxeen, si ay uga mudaaharaadaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus.
Illaa 500 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay rabshadaha maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza.
Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyey khasaaraha nafeed ee dhacay maanta, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyey lix toddobaad oo dibadbaxyo rabshado wata ay galaaftaan nolosha 50 qof oo Falastiiniyiin ah, iyo sidoo kale askar Israeli ah.
Dadka wax dhaliila ayaa Israel ku dhalleeceeyey isticmaalka rasaasta, halka Israel ay sheegtay in ficilladadeed ay lagama maarmaan u yihiin sugidda amniga.
Ka sokow diidmada furitaanka safaaradda Mareykanka, Falastiiniyiinta ayaa ka dibadbaxaya musiibadii dhacday 1948-kii, markaas oo boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah laga barakiciyey guryahooda, kadib aasaaskii Israel.
Safaaradda cusub ee Mareykanka ayaa si KMG ah looga furayaa dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee Jerusalem, inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub, kadib markii madaxweyne Trump uu amray in laga soo raro magaalada Tel Aviv. – VOA Somali News